होमपेज, कीट नियन्त्रण
प्रायः प्रायः अपार्टमेट्सका बासिन्दाहरूले उनीहरूको शरीरमा काटनको श्रृंखला देखाउँछन्। तिनीहरूले मात्र अनुमान लगाउन सक्छन्, किनकि यसको अपार्टमेंट अपार्टमेन्ट बगहरू देखा पर्छन्। एक नियमको रूपमा, तिनीहरू नियमित रूपमा सफा र कालीन बाहिर जान्छन्, तर परजीवीहरू अझै देखा पर्न र किरायेदारको जीवनलाई खराब पार्छन्।
परजीवी संग एक हल्का युद्ध शुरू गर्नु अघि र कुन तापमानमा बग मर्छ भनेर पत्ता लगाउनु अघि, यो क्यान्सरबाट आएको छ भनेर थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ। यसले नयाँ आक्रमण रोक्न भविष्यमा मद्दत गर्नेछ।
अपार्टमेंट मा बिस्तर बग को कारणहरु
त्यहाँ थुप्रै कारकहरू छन् जुन bedbugs एक बाँझ अपार्टमेटमा देखा पर्दछ:
छिमेकीहरु। बेडबक्सको मुख्य "आपूर्तिकर्ताहरू" ती व्यक्तिहरू छिमेकीमा बस्छन्। परजीवीहरूले सानो स्लॉटहरू छतमा प्रयोग गर्छन् र सजिलैसँग एक अपार्टमेन्टबाट अर्कोमा आफ्नो बाटो बनाउँदछ। मानव रगतको गन्धले बाहिरी बागहरू ठाडो दिशामा सार्न उत्प्रेरित गर्छ। तिनीहरू सजिलै भित्री पर्खाल र छेउमा भित्तामा घुम्न सक्छन्। वयस्क व्यक्ति लामो भुखमरी सामना गर्न सक्षम छन्, त्यसैले तिनीहरूको लागि माथि वा तल फ्लोरिङमा कुनै समस्या छैन।
पालतू जनावरहरू। Bedbugs लाई अक्सर जानवरहरू यातायातको रूपमा प्रयोग गर्दछ। पशु रगत को परजीवीहरु को लागि उपयुक्त छैन, यसैले वे जानवर मा फिर्ता लौट सम्म प्रतीक्षा गर्छन। यहां सम्म कि एक महिला बग एक सानो अवधि को लागि पर्याप्त छ घर मा बिस्तर कीड़े को एक पूरा उपनिवेश।
यात्रा। निकटतम पार्क मा व्यवसायिक यात्रा या आउटडोर मनोरंजन को घर मा बिस्तर कीडे हुन सक्छ। कपडाहरूको साधारण परीक्षाले मद्दत गर्दैन। परजीवीहरूले बैगको तह र समुद्रमा लुकाउन सक्छन्। आफैलाई र उनीहरूका प्रियजनहरूको रक्षा गर्न, यो सुचारु हुन्छ कि चीजहरू हातमा पछाडी सूटकेस सहित, सुखा सफाई गर्न।
पुरानो फर्नीचर। एक समर्थित फर्नीचर खरीद गर्दा तपाईं 100% पक्का हुन सक्नुहुन्न कि यो bedbugs को एक परिवार मा रहन सक्दैन। यो नयाँ उत्पादनहरू खरिद गर्न उत्तम छ, किनकी कारखाना र बिरुवाहरूमा, परजीवी एक - मानिसहरूको।
बेबीबक्स को विभिन्न स्थितियों मा
एक बग मर्नुको तापमान बुझ्न, यो आफ्नो जीवनको अवधि संग परिचित गर्न सार्थक छ। सबैभन्दा अनुकूल परिस्थितिमा, लार्वाले पाँचौं दिनमा परजीवीमा फर्काउँछ। एक बेडबड एक बर्षको बारेमा जिउन सक्छ।
यदि लार्वाले उच्च तापमानमा विकास गर्छ भने - 25 देखि 30 सम्मको डिग्री, वयस्क नमूनाको विकासको प्रक्रियालाई चिन्ह लगाइएको छ। हीटले दस महिनामा परजीवीको जीवनलाई पनि कम गर्छ।
बीस देखि पच्चीस डिग्रीको तापमानमा, कीराहरू लामो समयसम्म पन्ध्र महिनासम्म बाँच्न सक्छन्।
यदि वातावरणको तापमान अंक भन्दा कम हुन्छ त पन्द्रह डिग्री, त्यसपछि लार्वा विकासमा रोकिन्छ, र वयस्क व्यक्ति एबीबायोसिसमा आउँछ। समान स्थितिमा, तिनीहरूले अठारह महिना सम्म खर्च गर्न सक्छन्।
आलोचनात्मक तापमान - बगहरू लड्नको लागि एक साधन
Bedbugs को लागि उच्च तापमान घातक छ। तर कुन तापमानमा बग मर्छ? शून्य माथि पाँचौं डिग्री उहाँलाई केही मिनेटमा मारे। एक व्यक्तिको जीवन तीस मिनेटमा घटाइएको छ यदि यो वातावरणमा छ जहाँ तापमान कम्तीस-पाँच डिग्री पुग्छ। लार्वाको अधिकतम जीवनभर 24 घण्टा छ।
Bedbugs पनि चिसो संवेदनशील छन्। शीतको दस डिग्री तिनीहरूलाई निलम्बित एनिमेसनमा घटाउँछ। शून्य भन्दा तल पन्ध्र डिग्री बेदबगहरूका लागि घातक हुन्छ। तर तिनीहरू केवल मर्छन् जब यो तापमान तीन दिन भन्दा बढी हुन्छ। माइनस बीस डिग्री - र केही घण्टामा बग मर्छ। लार्वा दुई दिन बस्न र त्यसपछि मर्छ।
भ्यागुडीको बिरुवा र उबलते पानी
जब यो पहिल्यै ज्ञात हुन्छ, कुन तापमानमा बग मर्छ, तपाई अर्को चरणमा पुग्न सक्नुहुन्छ - उनीहरूका विनाश। पहिला, तपाईं को लागी दुई तरिका को उपयोग गर्न को लागी तय गर्नु पर्छ: उच्च या निम्न तापमान को संपर्क।
एउटा अपार्टमेन्टमा बेडाबगहरूको विनाश सरल कार्य होइन। सबै निर्देशनहरू पछ्याउने विफलताले परजीवीहरूको बारम्बार प्रजनन हुन सक्छ। तर कुन तापमान बिस्तरको कीरामा मर्दै जान्छ, तपाईं पूर्णतया तिनीहरूलाई हटाउन सक्नुहुनेछ। उच्च तापमान संग परजीवीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्:
भाप जनरेटर। यन्त्रले तपाईंलाई कुनै पनि सतहको बेडबक्स सफा गर्न अनुमति दिन्छ। जेनरेटरले सिर्जना गरेको तातो धुलोले बगहरूबाट लार्वा र वयस्कहरूलाई नष्ट गर्दछ।
बासिन्दाहरूले काँध नियन्त्रण गर्न थर्मो बन्दूक प्रयोग गर्न सक्दछ, जुन खिंचाव छतको स्थापनामा प्रयोग गरिन्छ। थर्मो बन्दूक प्रयोग गरेर एक अपार्टमेन्टमा बेबीबक्सको विनाश थोडा समय लाग्छ: हावा साठ डिग्री सम्म गरम हुनुपर्छ र तापमान 30 मिनेटको बनाए।
सफा बिस्तर लिनन र कालोबाट लुगाहरू धोकाको मद्दतले गर्न सकिन्छ। चीजहरू पानीमा धोइदिनुपर्छ, जसको तापमान नब्बे डिग्री छ।
कसरि अपार्टमेंट मा आफैलाई बग को छुटकारा प्राप्त गर्न को लागि? जवाफ सरल छ: इस्त्री। चीजको लागि अधिकतम तापमान प्रयोग गरी लिनन र कपडाहरू दुवै पक्षमा लुगा लगाइन्छ।
बुडबगहरू स्किङ बोर्ड र क्रिभसहरूमा छुटकारा पाउन, तपाईं परजीवीहरूमा उबलते पानी जोड्न सक्नुहुन्छ।
बगहरू सङ्घर्षमा उच्च तापमानको फाइदा
बेडबक्स विरुद्ध उच्च तापमान प्रयोग गर्ने लाभहरू पर्याप्त छन्। तिनीहरूमध्ये:
मानव शरीरलाई हानिकारक। असुविधाको लागि मात्र स्वच्छ पानी प्रयोग गरिन्छ।
भाप वा उबलने पानीको सतह प्रशोधन गर्न एकदम सरल छ, यो प्रश्नको उत्कृष्ट जवाफ हो "कसरी अप्ठेरोमा बगहरू बाट छुटकारा पाउन।"
पानी र भाप मद्दतको कीराहरू हटाउन, कपडा र छातीको छातीमा बाँच्न, बिना कीटनाशक प्रयोग नगरी।
भापले दरबारहरू घुमाउँदैन।
बेडबक्सबाट पुस्तक हटाउन असम्भव छ।
भापको कारण विद्युत् उपकरण क्षतिग्रस्त हुन सक्छ।
कम तापमान र ठंड
यस तथ्यसँग व्यवहार गर्न, कुन कडा कडा तापमान कीराहरू मर्छन्, तपाईं तिनीहरूलाई ठोक्ने मदतको साथमा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
ठण्डको मौसममा, बेडबक्सहरू अपार्टमेट्स र घरहरूमा तापनि नजिक जान्छन्। तपाईं तिनीहरूलाई मात्र फ्रिज गर्न सक्नुहुन्छ जब थर्मामीटरले शून्य तल पन्ध्र डिग्री फिक्स गर्दछ। त्यस्तो अवस्थामा, विन्डो खुल्ला खुल्ला खोल्न आवश्यक छ र यस अवस्थामा धेरै दिनको लागि कोठा छोड्न आवश्यक छ।
थर्मोमीटरको स्तम्भ माइनस बीस डिग्री फिक्स गर्दछ जब पूर्णतया बेडबक्सबाट हटाउन यो 24 घण्टा लाग्ने हुन्छ। तर यो सधैं सम्भव छैन कि केहि दिन को लागी विन्डो खुल्यो। त्यस्तो अवस्थामा, तपाईं सडकमा "दूषित" वस्तुहरू लिन सक्नुहुन्छ। यदि परजीवीहरूको घोंसला भेट्टाउन र स्थानीयकृत गर्न सकिन्छ, त्यसपछि तिनीहरू फ्रीजरमा नाश गर्न सकिन्छ।
परजीवीहरूलाई नियन्त्रण गर्न कम तापमानको प्रयोग एकदम बेग्लै र बिल्कुल बेकार हुन्छ। तर यो विधिमा महत्वपूर्ण खतराहरू छन्:
उचित रूपमा गैर-आवासीय परिसरको लागि उपयुक्त।
विषाक्तताको समयमा, अपार्टमेन्टको परिष्करणले पीडित हुन सक्छ।
पाइपहरूले महत्त्वपूर्ण तापमान सामना गर्दैनन्।
बगहरू विरुद्ध लडाइँमा सुरक्षा
उच्च तापमान को माध्यम ले परजीवीहरु को विरुद्ध लडने को समयमा किरायेदारों को सुरक्षा सावधानी को पालन गर्नु पर्छ:
भाप जनरेटर प्रयोग गर्दा, यो मान्छे, फर्नीचर, भर्जिन र वालपेपरमा प्रत्यक्ष नदिनुहोस्।
कोठामा न्यानो बनाउने बेला, सबै प्लास्टिक वस्तुहरू निकाल्न राम्रो छ।
बगहरू नियन्त्रण गर्न कम तापमान मात्र कोठाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ जहाँ सिलाई र ताप्लेटको पाइप छैन।
यदि तपाईं आफैलाई बेगबग्सबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न भने, त्यसपछि मात्र एक मात्र उपाय विशेषज्ञहरूबाट मद्दत खोज्नु हो।
बाहिर हेर्नुहोस्, घरमा फराकिलो! निजी घरमा fleas बाट छुटकारा पाउन कसरी केही सुझावहरू
बगहरू प्रायः अपार्टमेन्टमा कहाँ बस्छन्?
राखिएको महिला - यो हुनुहुन्छ?
जब त्यहाँ खेल्ने कार्ड र कार्ड खेल थियो
"प्रलोभनमा": तातियाना Arntgolts (2014, रूस) संग फिलिम को एक सारांश
को किंडरगार्टन मा समूह को नाम - चयन कसरी गर्ने?